ဖေဖော်ဝါရီ CRAS ပွင့်လင်းသောအိမ်၌ ၂၀၁၇ ဂရမ်မီအမည်စာရင်းတင်သွင်းသော CRAS Grads များပေါ်ပေါက်လာမည် NAB သတင်းများ | 2017 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 2017 ဂရမ်မီဖေဖော်ဝါရီလ CRAS ပွင့်လင်းအိမ်မှာထငျရှားပွဖို့ CRAS Grads ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး
ဖေဖော်ဝါရီလ4တွင်, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory အလားအလာကျောင်းသားများရန်၎င်း၏တံခါးပေါက်ဖွင့်လှစ်; သုံး 2017 ဂရမ်မီ-ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး CRAS Grads လက်တွင် Be မူမည်
2017 ဂရမ်မီဖေဖော်ဝါရီလ CRAS ပွင့်လင်းအိမ်မှာထငျရှားပွဖို့ CRAS Grads ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး
Gilbert, Ariz ။ , ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2017 - ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory (CRAS; www.cras.edu), အသံအင်ဂျင်နီယာပညာရေးများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့အစည်း, စနေနေ့မှာအလားအလာကျောင်းသားများ, မိဘ, မီဒီယာမှ၎င်း၏ Gilbert, Ariz ကျောင်းဝင်း (1205 N. Fiesta Blvd. ) မှတံခါးဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်, 4am ကနေဖေဖော်ဝါရီလ 10 - ။ 4pm (ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ) RSVP ရန်။ သုံး 2017 ဂရမ်မီ-ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး CRAS ဘွဲ့ရဟာပွင့်လင်းအိမ်များအတွက်လက်ပေါ်ပါလိမ့်မည်, သူတို့ကလည်းလက်ရှိ CRAS ကျောင်းသားများအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ၏ညနေပိုင်းတွင်ကျင်းပသည့် "2 ဂရမ်မီ CRAS Panel ကို" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
"အဲဒီမှာမယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းများကိုထွက်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကျောင်းသားများကိုဤနေရာတွင် CRAS မှာသူတို့ရဲ့ယာဉ်အသုံးချတတ်ရန်သင်ယူကူညီဆက်ကပ်အပ်နှံပါတယ်" ဟု Kirt Hamm, CRAS စီမံခန့်ခွဲသူကဆိုသည်။ "ဒါကတစ်နှစ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်, အကြိမ်ပေါင်းများစွာရဲ့, ငါတို့သူတို့သည်ငါတို့အလုပ်သင်အဖွဲ့ဒြေ, ဝန်ထမ်းများ, ကျောင်းသားများနှင့် grads နှင့်တသားတ-on-တဦးတည်းဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်မည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ရန်အလားအလာကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သူတို့ကအစတွေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စတူဒီယိုထဲမှာတိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်တိုက်ရိုက်အသံ Venue, ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်စာသင်ခန်းလိမ့်မည်။ "
CRAS သူတို့ပွင့်လင်းအလုပ်ဈေးကွက်ထိမှန်သည့်အခါမျှော်လင့်ထားရန်အရာကိုသိနိုင်အောင်ထွက်ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုပထမဦးဆုံးလက်ရဲ့အရာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးဖို့လိုသည်။ ကျောင်းရဲ့မဖြစ်မနေအလုပ်သင်အစီအစဉ်ကိုအပြင်ဖြစ်စေအခြားသူများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသူ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အလုပ်အကိုင်အထဲသို့ခုန်ကြပြီတော်မူသောငါတို့၏ဘွဲ့ရနှင့်အတူထိတွေ့အတွက်၎င်း၏ကျောင်းသားများကိုလာပြီ, ကြီးမားသည်။ "ဒါဟာဒီ panel ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်ပွင့်လင်းအိမ်ခန့်ကဘာလဲဆိုတာဖွင့်," Hamm ဆက်ပြောသည်။ "အဆက်ပညာရေး, ကွန်ယက်, ထိုသို့ပြီးသားကြောင့်ပြုမိပါပြီသောသူတို့သည်တစ်ဦး၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထွက်ဘို့ကြာသောအရာကိုလေ့လာသင်ယူမည်သည့်ကျောင်းသားများအတွက်ကြီးမားသောတန်ဖိုးဖြစ်၏။ "
အဆိုပါဘွဲ့ရ panel ကအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်:
ike Schultz: Larrabee စတူဒီယိုမှာ 8 အချိန်ဂရမ်မီဆုရှင်ရောနှောအင်ဂျင်နီယာမန်နီ Marroquin မှလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာရောမွှေ; ike Kanye West, အဆိုတော် Adele, Rihanna, Justin Bieber ကို, Meghan Trainor, ကယ်လ်ဗင် Harris ကများနှင့်အခြားသူများအပါအဝင်အနုပညာရှင်အမျိုးမျိုးကနေစီမံကိန်းများအပေါ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း 21 2017 ဂရမ်မီ-အမည်စာရင်းတင်သွင်းအယ်လ်ဘမ်, သီချင်းများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအပေါ်အကြွေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Nik Karpen: ရောစပ် & မှတ်တမ်းတင်အင်ဂျင်နီယာအတွက် Los Angeles မြို့; အဆိုပါလူအများကလေးစား Conway မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် cello စတူဒီယိုမှာ interned; သူသည်မိမိအအလုပ်သင်ပြီးနောက် cello မှာဝန်ထမ်းအဖြစ်ပေါ်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ Nik အပေါ် Green Day ရဲ့အကြိုက်ကနေနီးပါး 10 သီချင်းများ, Keith Urban, Echosmith ယျတျောနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်, အထင်ကရရောနှောခရစ်သခင်ဘုရား-Alge ၏ mentorship အောက်မှာ 2,000 နှစ်ကြာအောင်ထားပြီးဆန့်ကျင်, Carrie Underwood, ဘရုစ် Springsteen, ငါ၏ဓာတု Romance, ချာ, ထလော့ အခွားသူမြားစှာအကြားဂျိုး Cocker, စတီဗင် Tyler, Aerosmith, Dwight Yoakam, Stevie Nick, Fleetwood, Mac နှင့်ကေ့ဆင်။
ယာရက် Hirshland: LA ကအတွက် Bombshelter စတူဒီယိုမှာ interned .; သူကအဲဒီမှာသုံးစွဲသုံးခုနှစ်တာကာလအတွင်းသူ engineer အထိပြောင်းရွေ့နှင့် DethKlok, ကျောက်ခေတ်ဘုရားကျောင်းလေယာဉ်မှူးများနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်; ထို့နောက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့သွား အား NBC's အသံ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုရာသီသည် ဖြစ်. , Elysian မာစတာမှာ Dave Cooley နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ကျွမ်းကျင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ; သူကတည်းကထိုကဲ့သို့ Madlib, Anderson က Paak တိုကျို Birds ဂိမ်း, Ziggy မာလီအဖြစ်အနုပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီ နှင့်ပိုပြီးအများအပြား။ သူကအင်ဂျင်နီယာနှင့်မျိုးစုံဂရမ်မီ-အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှတ်တမ်းများကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။
"CRAS ငါ့ကိုငါသည်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးဦးခေါင်းစတင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုအပ်ပေးတော်မူ၏," Hirshland ကဆိုသည်။
"ငါသည် CRAS သင်တန်းပို့ချ, အောင်မြင်သောသူကျောင်းသားများ, နှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအပေါ်သုတေသနတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်, အဲဒါကငါ့ပညာအတတ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်သွားရမယ့်နေရာကောင်းခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်" Schultz ကပြောပါသည်။ "CRAS မှာငါဂီတ၏အင်ဂျင်နီယာဘက်၏ဝေါဟာရသင်ယူခဲ့တယ်။ အကြောင်း, ငါ့ကိုရန်, ငါမတက်ရောက်ထံမှလက်ခံရရှိသောအကြီးမြတ်ဆုံးတန်ဖိုးကိုခဲ့ပါတယ်။ "
Nik Karpen ငါမတိုင်မီမှတ်တမ်းတင်အတွက် dabbled င်ပေမယ့်ငါဘာမှမသိခဲ့ပါကြောင်း CRAS မှာပထမဦးဆုံးနေ့၌သဘောပေါက် "Added ။ သင်ယူဖို့အများကြီးရှိခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ယူနှင့်မည်သို့အတူတကွအားလုံး interface ငှါ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံ, ထက်နည်းတစ်နှစ်အတွက်ငါစတူဒီယိုနှင့်ခံစားသို့လမ်းလျှောက်ရှိရာတစ်ဦးအလုပ်သင်ထဲမှာပေါ့ဆိုတဲ့အချက်ကို: ငါတကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူလက်-on ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းတန်ဖိုးထား အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူယုံကြည်မှု။ "
ဖေဖော်ဝါရီ4ပွင့်လင်းအိမ်မှာဧည့်သည်များ CRAS ဒြေနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်၎င်း၏များပြားစာသင်ခန်းတစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံပိုင်သို့မဟုတ်-The-Art အသံဂီယာပျံ့နှံ့အဖြစ်က၎င်း၏ 42-ခြေလျင်မိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်ယူနစ်တစ်ခုအရသာရနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကအစတိုက်ရိုက်အသံ Venue အဲဒီအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကအသံဖမ်းစတူဒီယိုအများအပြားနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာတိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory Gilbert နှင့် Temp, Ariz နှစ်ခုအနီးအနားမှာကျောင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးက CRAS ပညာရေးသောသူဆုရသင်တန်းပို့ချခြင်းဖြင့်ဆုံးမသွန်သင်ရှိသမျှတို့, ထုတ်လွှင့်အသံ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသံရုပ်ရှင်နဲ့ TV ကိုအသံ, ဂီတ, နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအသံလည်းပါဝင်သည် အားလုံးသံကိုအားဖြည့်, အသံဖမ်းခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖမ်း, troubleshooting / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်တေးဂီတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်သူတို့၏တစ်ဦးချင်းစီနယ်ပယ်များတွင်အစွမ်းပြပြီ။
အဆိုပါ 11 လအစီအစဉ်ကိုတိုင်းကျောင်းသား access ကိုသင်ယူနှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art အသံဖမ်းနှင့်အတူဖွဲ့စည်းနှင့်ဂီယာဖော်စပ်သော Conservatory ရဲ့စတူဒီယို၏အပေါင်းတို့ကို, ဒီနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစတူဒီယိုမှာအသုံးပြုတဲ့တူညီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လွှင့်အတွက်လေ့ကျင့်ပေးရန်ခွင့်ပြုဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် Pro ကို Tools များ 12, API ကိုအမွေအနှစ် consoles စ, SSL ကို AWS consoles စ, Studer Vista က consoles စ, ပြီးအများကြီးပိုအပါအဝင်အဆောက်အဦ။ ကျောင်းသားအားလုံးနောက်ဆုံးမှာစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်အဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါသခင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အစီအစဉ် II ကိုကနေဘွဲ့ရတစ်ဦး 280 နာရီစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်သင်ဖြည့်စွက်ရပေမည်။ လောလောဆယ်နှစ်ခု CRAS ဘွဲ့ရ 2017 ဂရမ်မီဆုပေးပွဲများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 32 CRAS ဘွဲ့ရမြောက်မြားစွာအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီး 101 2017 ဂရမ်မီ-အမည်စာရင်းတင်သွင်းအယ်လ်ဘမ်နှင့်သီချင်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့လူတိုင်းမြင်နိုင်, ကြား, ငါတို့ 11 လအစီအစဉ်ကိုကျောင်းသားတစ်ဦးမှတ်တမ်းတင်အနုပညာများ၏အများအပြားရှုထောငျ့တစုံတယောက်သောသူ၌မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှုအသကျရှငျစလုပ်ဖို့ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်သောအရာကိုအပေါ်သီးသန့်အလေးပေးဘယ်လိုခံစားရချင်," Hamm ရှင်းပြသည်။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.cras.edu, Kirt Hamm, စီမံခန့်ခွဲသူကိုဆက်သွယ်, 1-866-757-3059 မှာ, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ် [အီးမေးလျ protected].
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-02-02
ယခင်: WCPMedia န်ဆောင်မှုများ cloud-based ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့ဖြန့်ဖြူးမည့်အင်္ဂါရပ်များတိုးချဲ့ခြင်း